Xukuumadda Somaliland Oo Ceel-Biyood Ka Dhagax Dhigtay Deegaanka Laf-Weyn Ee Gobolka Sool | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Xukuumadda Somaliland Oo Ceel-Biyood Ka Dhagax Dhigtay Deegaanka Laf-Weyn Ee Gobolka Sool
Wasiir Baashe Cali Jaamac Oo Booqday Mid Ka Mid Ah Degmooyinkii Cusbaa Ee Madaxweynuhu Magacaabay Adhi-cadeeye (Hubaal) Wefti uu hoggaaminayo wasiirka kheyraadka biyaha Baashe Cali Jaamac socdaal ku marayay deegaanno ka tirsan gobolka Sool ayaa lagu soo dhaweeyay degmada Adhi caddeeye ee gobolkaasi.
Weftigan oo xubno ay ka yihiin xildhibaanno kamid ah baarlamaanka, badhasaabka gobolka Maroodi Jeex, siyaasiyiin iyo masuuliyiin ka tirsan wasaaradda kheyraadka biyaha ayaa markii ay gaadheen degmada Adhi Caddeeye oo dhawaan madaxweynuhu u magacaabay degmo, waxa degmadaasi jewi diiran kusoo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi, oo waddada hareeraheeda tubnaa. Xildhibaan Cabdiqaadir maxamed Xasan Indho indho oo ka tirsan golaha guurtida Somaliland isla markaasina xubin ka ahaa weftiga wasiirka ayaa uga mahad celiyay soo dhaweynta balaadhan ee dadweynaha degmada Adhi Caddeeye, xogwaran koobana ka siiyay bulshada shirkii degmada Awr-boogays ee Samo-talis “waxaanu idiinka mahadnaqaynaa soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha leh ee reer Adhi Caddeeye ee degmada loo magacaabay oo ay ka muuqato farxadii iyo mahadnaqii shirka. Waxaanu sidoo kale ka mahadnaqaynaa degmadii kale ee la noogu soo dhaweeyay sidan, ilaa intii aanu kasoo baxnay goobtii Awr-boogays ee shirku ka socday. Waxaanu dareemaynaa kalgacayl iyo farxad heshiisyadii inay dadku raali ka yihiin, inaad ka jawaabaysaan degmadii cusbayd ee laydin siiyay, waxaanan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha somaliland oo degmadan u magacaabay oo weliba degmona geyda, dhawaan intii aanu shirka fadhinay, insha Allah waxaananu rajaynaynaa inay noqoto degmo khayr qabta oo wanaagsan.” Ayuu yidhi Cabdiqaadir Maxamed (Indho Indho).
Wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha Baashe Cali Jaamac ayaa isna hadalo kooban halkaasi ka jeediyay “dadweynaha reer Adhi-caddeeye oo iyagoo isku dhan oo midaysan nasoo dhaweeyay, aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa. Waxa farxad labaad ii ah markii iigu kiin dambaysay Adhi-caddeeye oo tuullo ah ayaan ka tegay, maanta waa markii ugu horeysay ee iyadoo degmo ah aan imaado, taasna mahadeeda waxa iska leh madaxweynaha Somaliland. Waad ogtihiin oo shirweyn baa ka dhacay Awr-boogays, warkiisana waad haysaan, waxa kale oo aydun muujiseen taageerada aad shirka u haysaan iyo ta Somaliland iyo sidoo kale diiwaangelinta iyo diyaargarowga. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa reer Adhi-caddeeye.” Ayuu wasiirku yidhi
Dhinaca kale weftigan uu hoggaaminayo wasiirka biyaha intii aanay soo gaadhin degmada Adhi-caddeeye, waxa uu dhagax dhigay ceel-biyood riig ah oo laga bilaabi doono deegaanka Laf-weyn oo ka tirsan gobolka Sool. Dadweynaha degaanka ayaa soo dhaweeyay mashaariicdaasi, isla markaana ka dareen celiyay sida ay u arkaan; “been baa lanaga fidiyay oo waxa la yidhi Laf-weyne ma ogola in ceel-biyood laga qodo, dacaayadaasina md aanu qaadan karo maaha, haddii tobon ceel lanoo qodoyo waxaanu leenahay raali baanu ka nahay. Biyahaasi waxaanu kasii jeclaan lahayn in lanooga badiyo ceelka, oo kuwe kalena waanu u baahan nahay.” Ayay yidhaahdeen dadweynaha deegaankaasi Laf-weyn.
Sidoo kale waxa ka hadlay ceelkaasi loo qorsheeyay degaanka Laf-weyn wasiirka biyaha oo ka waramay muhiimada uu u leeyahay bulshada degaankaasi ku dhaqan, iyo sidoo kale qorsha ay tahay in looga faa’ideysto biyahaasi, waxaanu yidhi; “aad baan ugu faraxsan nahay inaan Laf-weyne imaado, oo aan ka dhagax dhigo ceel-biyood. Ceel-biyoodkaasi wuxuu la nooc yahay ceelashii laga qoday Jiidali iyo Adhi-cadeeye, waa ceel casriya oo ku dhaqayn doona Solar halkii Naafato idinkaga bixi lahayd Mishiinka, meshiina waa uu yeelanayaa, annagoo u samayna Maamul, sidaa daraadeed waxaan idinka rajeynayaa ninkii nabadgelyo darro wada inaad iska qabataan.” Ayuu yidhi wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha Baashe cali Jaamac